परिवर्तन खोज्छौं, आफैं बदलिन तयार छैनौं
अन्नपूर्ण शनिवार, साउन २८, २०७४ 5566 पटक पढिएको
नेपाली समाज हिँडेको बाटो, यसका रूप र प्रवृत्तिमा आएका फरकबारे विभिन्न बहस भएका छन् । नेपाली समाजको असली चरित्र के हो भन्नेबारे अझै पनि टुंगो लागिसकेको छैन । केही बुद्धिजीवीका निम्ति नेपाली समाज अझै पनि सामन्ती समाज हो भने केहीका निम्ति पुँजीवादी । नेपाली समाज र यसका स्वभावबारे आफ्नै ढंगको बुझाइ राख्ने एक बुद्धिजीवी हुन् - प्राडा लय उप्रेती । आमसञ्चारका माध्यममा हत्तपत्त देखा पर्न नखोज्ने तर दिनरात प्राज्ञिक कर्ममा लागिपर्ने प्राध्यापक उप्रेती त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागका प्रमुख हुन् । एक वर्षअघि मात्रै समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र विभागबाट अलग भएर बनेको मानवशास्त्र विभागलाई उदाहरणीय बनाउन उनले गरेको प्रयत्न लोभलाग्दो छ- नियमित पठनपाठनसँगै अनुसन्धान, बहस र प्रकाशन गरेर विशिष्ट विभाग बनाउन लागिपरेको छ उप्रेती- टिम । नेपाली समाजलाई भित्रैबाट चिनेका र यसका स्वभाव केलाएका प्राध्यापक उप्रेतीसँग नेपाली समाजको विशिष्टतादेखि पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न आयाममा केन्द्रित रहेर लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको अन्तर्वार्ता :
नेपाली समाजको विशिष्टता के-के हुन् ?
नेपाली समाजका विशिष्टता केही छन् । ती पाश्चात्य मुलुकका भन्दा फरक छन् । जस्तै हामी अहिले आधुनिकताको बाटोमा लागे पनि मूलत: यो परम्परागत समाज हो । परम्परागत समाजको मुख्य विशेषता के हो भने एकले अर्कोलाई सघाउने अर्थात् कोअपरेटिभ फिलिङ । समुदायमा भएको कोअपरेटिभ फिलिङ महत्र्वपूर्ण छ । यो कृषि प्रणालीले दिएको एउटा विशेष देन हो । अहिले केही व्यक्तिले कृषि प्रणाली धराशायी भइसक्यो भने पनि नेपाली समाज कृषिकै जगमा बाँचेको छ । राज्यको आर्थिक प्रणालीअनुसार, सामाजिक बन्दोबस्त पनि हुने हुनाले समाज पनि त्यसैअनुसारको छ । काठमाडौंकै परम्परागत नेवारी परिवार संयुक्त नै छ । त्यस्तै हाम्रा गाउँहरू पनि एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर चल्छन् किनभने इतिहासदेखि नै हाम्रा गाउँ परनिर्भर भएका छैनन् । गाउँमा रैथाने ज्ञान र रैथाने प्रविधि हुन्छ । त्यसले नै समाज सञ्चालन गर्न टेवा पुर्‍याइरहेको छ । त्यसकारण, को-अपरेपिटभनेस (सहकार्य) नै हाम्रोे विशिष्टता हो । भूमण्डलीकरणका कारण हाम्रो यो विशिष्टतामा ह्रास आइरहेको छ । हामी बिस्तारै अरूको मुख ताक्ने भएका छौं । विदेशी सहयोग नेपालमा भित्रिन थालेपछि गाउँहरू पनि परमुखी हुन थालेको देखिन्छ । यद्यपि मूलत: यो एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, रैथाने ज्ञान, शास्त्र, विज्ञान, प्रविधि, क्षमता, दक्षता र पारस्परिक सहयोगमा बाँचेको समाज हो । तथाकथित दसवर्षे 'जनयुद्ध' र त्यसपछिका १०÷१५ वर्षको संक्रमणकालपछि पनि समाज किन रहिरहेको छ ? यही विशिष्टताले नै त नेपाली समाज बाँचेको हो ।
विदेशगमनले नेपाली समाजमा के प्रभाव पारेको छ ?
झन्डै चार सय वर्षदेखि हामी विदेशसँग कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएका छौं । मूलत: सुगौली सन्धिपछिका दिनमा हामी विदेशीसँग जोडिएका छौं । सुगौली सन्धिपछि गोर्खा भर्तीबाट हामी अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादी व्यवस्थासँग जोडिन पुग्यौं । त्यसपछि श्रम बेचेर अर्थ-उपार्जन गर्न थाल्यौं । भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन जम्दै गएपछि भारतीय पहाडहरूमा नेपाली श्रम बिक्न थाल्यो । मेरै हजुरबाहरू नै आसामका चिया बगानहरूमा चिया टिप्न जान थाले । श्रम बेचेर दुई पैसा कमाएर ल्याएर समाज चलाउने चलन आजको होइन, पुरानै हो ।
हामीले किन आफैंसँग भएको मानव- श्रम उपयोग गर्न सकेनौं त ?
- मुलुकको श्रम त्यतिबेला मात्र उपयोग गर्न सकिन्छ जतिबेला रोजगारका अवसर सुनिश्चित हुन्छन् । हामीले अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सक्ने सम्भावना भएको बेलामा द्वन्द्व र संक्रमण सुरु भयो जसले लगानीको वातावरण बन्न दिएन । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्दासम्म कुनै पनि देश उँभो लाग्दैन । हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नै सकेनौं । आधुनिकीकरण गर्न नसकेपछि उद्योगको लागि आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बनाउन सकेनौं । यसले गर्दा अहिले हामी श्रम व्यापार गरिरहेका छौं । अहिले बर्सेनि चानचुन पाँच लाख युवा श्रमका लागि तयार हुन्छन् । तीमध्ये एक लाख त हाम्रो घरेलु बजारले लिन्छ बाँकी चार लाख युवा बेरोजगार बन्छन् । ती युवा यहाँ राख्दा विद्रोह पनि हुन्छ । मान्छेलाई त अवसर चाहिन्छ । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो श्रमको खाँचो छ । हाम्रो श्रम एकदमै कम सीपयुक्त भएकाले सस्तो छ । त्यसैले दु:ख पाए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढेको हो।
वैदेशिक रोजगारीलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यसको दुई प्रकारको ट्रेन्ड छ: एक, हामीले रोजगारको सिर्जना गर्न सकेनौं । अहिले अर्थतन्त्र उकालो लागेको भनिए पनि औद्योगिक क्षेत्रको योगदान शून्यप्राय: छ । हामीले कृषिमा पनि रोजगारीको सिर्जना गर्न सकेनौं । त्यसैले दिनहुँ १५ सय युवा बाहिर पठाउनु परिरहेको छ । बर्सेनि दुई, चार सय शव भित्र्याउनुपरेको छ । अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भोगचलनमै खर्च हुन्छ । त्यसको पाँच प्रतिशत पनि लगानी हुँदैन । पुँजीको पुनर्निर्माण नगर्दासम्म मुलुकको विकास सम्भव छैन । ल्याए जति पैसा खाएरै सक्छौं । एउटा राम्रो पक्ष छोराछोरी भने पढाइरहेका छौं । त्यसैले भविष्य केही सुन्दर हुन सक्छ । लगानी नहुनु चाहिँ ठूलो विडम्बना हो ।
वैदेशिक रोजगारीको एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ । विदेश गएर दु:ख, हण्डर खपेर आएका युवाहरूले अचेल गाउँगाउँमा स्वरोजगार गर्न थालेका छन् । त्यसैले बाहिर नजाऊ पनि भन्नु हुँदैन । बाहिर गएपछि एक्स्पोजर हुन्छ । दु:ख खप्छ, ज्ञान लिन्छ, प्रविधि सिक्छ । त्यसैले हो उसलाई अगाडि बढाउने । बेलायतीहरू किन अगाडि बढे ? आलु पनि खान नपाएर, कहाँ खान पाइन्छ भनेर, बन्दुक पड्काएर जहाज लिएर हिँडेका हुन् । संसारभरि चहार्दा उनीहरूले धेरैथोक सिके । हाम्रोमा अन्न उब्जनी हुने, धान फल्ने, कोदो फल्ने हुनाले त्यसरी दु:ख गर्नु परेन र बाहिर जानुपरेन ।
यो प्रक्रियासँग राजनीतिक परिवर्तनको पनि केही सम्बन्ध छ कि ?
कसैले मन पराए पनि, मन नपराए पनि पञ्चायत शासनको अवशानपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तीनवर्षे शासनमा नेपालको सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर थियो । त्यसपछिको नेकपा (एमाले) को नौ महिने शासनसम्म पनि आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भयो । आर्थिक वृद्धिद्धर बढ्दै गएको त्यो बेला राजनीतिक उथलपुथल भयो । त्यसले राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन त आयो तर राजनीतिक गर्ने संस्कारमा भने परिवर्तन आएन ।
हाम्रो शक्ति सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आएन भन्न खोज्नुभएको ?
परम्परागत शक्ति-सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आएन । बाहिरी आवरणबाट हेर्दा नयाँ नेता त आए तर पुरानै कर्मचारीतन्त्र र परम्परागत सामाजिक संरचनाको कारण शक्ति-सम्बन्ध कायम नै रह्यो । एउटा सानो फ््रयाक्सनबाट द्वन्द्व सुरु भयो । त्यहीबेला ८÷१० वर्षको समयमा जब सांसदहरू किनबेच हुन थाले चरम निराशा पैदा भयो ।
तपाईंले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शक्ति संरचना र सामाजिक संरचना फेरिएको छैन भन्नुभयो । यसोभन्दा त समाज स्ट्याग्न्यान्ट (स्थिर) नै छ भन्ने अर्थ लाग्दैन ?
राजनीतिक परिवर्तन भए भनिन्छ तर समाजको आधारभूत शक्ति संरचना खासै फेरिएको छैन । हिजो जमिनदारहरूसँग शक्ति थियो । आधुनिकीकरण सुरु हुनासाथ तिनैका छोराछोरीले पढ्न पाए । राणाशासन गयो तर पहिलो छात्रवृत्ति पाउने को थियो ? तिनै राणाका छोराछोरी । तिनै शक्तिमा आए । अहिले तपाईंले हिजो सडकमा दु:ख पाएको केही नेताको व्यक्तिगत जीवनमा सुधार भएको देख्न त सक्नुहुन्छ तर आधारभूत तहमा के परिवर्तन भयो त खोइ ? गाउँमा जानुभयो भने पुरानै शक्ति-सम्बन्ध छ । हिजोको जमिनदार आज एमाले, कांग्रेस, माओवादीजस्ता पार्टीमा छ । जुन दलमा भए पनि उसैसँग शक्ति छ । परम्परागत नेवारी समाजमा पनि हिजो जुन आर्थिक संरचनामा शक्ति बाँडिएको थियो अहिले पनि त्यही नै छ । राजनीतिक शक्ति-संरचना सञ्चालन पनि परम्परागत रूपमा जसले सञ्चालन गथ्र्यो तिनैले गरिरहेका छन् ।
अर्थात्, प्रजातान्त्रिक परिवर्तनका हाम्रा अभ्यासहरू लाभदायक हुन सकेका छैनन् ?
हामीले प्रजातन्त्रका नामममा स्थानीय समुदायलाई शक्तिसम्पन्न बनाउन सकेकै छैनौं । संघीयता माने पनि नमाने पनि अहिलेको बहस के हो भने परम्परागत रूपमा सिमान्तकृत समुदायलाई शक्तिसम्पन्न बनाउने कि पुरानै खाकामा नयाँ नक्सा कोरेर लौ संघीयता भयो भन्दिने ? यो संविधानमा कोरिएको खाकाले सिमान्तकृत समुदायलाई शक्तिसम्पन्न बनाउँदैन ।
कसरी कोरिएको छ अहिलेको खाका ?
यो त नेताहरूको हितमा कोरिएको छ । चारजना बसेर आफूहरूलाई कसरी, के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर कोरिएको खाका न हो यो ।
के गर्‍यो भने स्थानीय तह शक्तिशाली हुन्छ ?
अहिलेसम्म सिमान्तकृत बनाइएको समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइनुपर्छ । उनीहरूलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ ।
त्यो त अहिलेको संविधानले सम्बोधन गरेको छैन र ?
- प्रगतिशीलताको आधारले हेर्दा यो संविधान केही प्रगतिशील छ । तर, हामीले गर्न चाहँदाचाहँदै पनि ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपले कमजोर मानिसलाई निर्णायक भूमिकामा ल्याउन सकेका छैनौं । त्यसकारण केही टाठाबाठा मान्छेहरूले उनीहरूलाई कमोडिटी (माल) को रूपमा, भोट बैंकको रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।
२०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि हाम्रो राजनीतिमा पहिचान राजनीतिले मुख्य हिस्सा लियो । यसले शक्ति-सम्बन्धमा केही फरक ल्यायो कि ?
- ल्याएको छ । आदिवासी आन्दोलन कुनै देशका केही मान्छेले मात्रै गरेर हुने होइन । यो ग्लोबल मुभमेन्ट (वैश्विक आन्दोलन) हो । पञ्चायतकालदेखि नै नेपालमा पनि यो आवाज उठ्न थालेको हो । उदार प्रजातन्त्र आएपछि बढी स्वतन्त्रता पाइयो । संगठनहरू खुले । ओम गुरुङ सरहरूले फेडेरेसन बनाउनुभयो ।
ऐतिहासिक रूपले हेर्दा जंगबहादुरले मुलुकी ऐन लागू गरेर आदिवासी-जनजातिहरूलाई जातीय संरचनामा बाँधेकै हो । आदिवासी समुदायलाई पनि त्यही फ्रेमवर्कमा राखिदिएको थियो । त्यसैले ओम गुरुङहरूको ग्रिभान्सेस (गुनासो) जायज छ । हाम्रो पनि पहिचान होस् भन्नुभएको छ उहाँले, त्यो ग्लोबल फेनोमेना हो । त्यसमा पनि केही समस्या छन् । तर, यसका धेरै सकारात्मक पक्ष पनि छन् । आज तपाईंले नेपाली राज्य व्यवस्थामा जति पनि समावेशीकरण देख्नुहुन्छ त्यो यही आन्दोलनको परिणाम हो । त्यसमा माओवादी आन्दोलनको पनि भूमिका छ । मधेस आन्दोलनको पनि भूमिका छ ।
भनेपछि २०५२ सालपछि जति पनि राजनीतिक प्रक्रिया भए त्यसका परिणाम यिनै हुन् ?
यी मुख्य हुन् । ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेको समुदायलाई रातारात परिवर्तन गर्न सम्भव नहुँदोरैछ । जेहोस् हामी प्रक्रियामा छौं । संविधानको डकुमेन्ट प्रगतिशील छ । गुनासोहरू त रहिरहन्छन् । त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो ।
यति परिवर्तन हुँदाहुँदै पनि शक्ति-संरचनामा तात्विक परिवर्तन भएको छैन भनेर हामीले छलफल गरिसक्यौं । हाम्रो प्रगतिका अवरोधकहरू के हुन् ?
- हाम्रो अहिलेको संविधानले कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष नटिक्ने परिपाटी बनाइदिएको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या यहीँनेर छ । कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूरै कार्यकाल उपयोग गर्न पाउनेगरी जबसम्म संवैधानिक दायरा बन्दैन, तबसम्म कुनै खाले तात्विक परिवर्तन हुँदैन । हेर्दा त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिएको छ, त्यो राम्रो छ । तर, यस्तो संरचनाको परिकल्पना गरियो कसैगरी पनि सरकारले पूरै कार्यकाल उपयोग गर्नै पाउँदैन । यो नै ठूलो समस्या हो । त्यसैले म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छु । मूलत: नेपाली कांग्रेसले गर्दा यस्तो प्रणाली बन्न नसकेको हो ।
यो त राजनीतिक विषय हो । हाम्रो सामाजिक संरचना वा सामाजिक मनोविज्ञानमै पनि केही समस्या छन् कि ?
मूलत: हाम्रो समाज सामन्तवादमा आधारित समाज हो । हामीले अहिले पनि समाजलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेका छैनौं । यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडकमा केही अघि बढेका छौं । तर, अझै पनि गाउँघरमा गएर हेर्नुभयो भने बाले भनेको मान्नुपर्ने, काका, ठूल्दाइले भनेको मान्नुपर्ने मान्यता छ । ठूलाले भनेको मान्ने भन्ने सामन्तवादी संस्कार हो । त्यसैगरी नै हाम्रो सामाजिकीकरण भएको छ ।
चैतन्य मिश्र, घनश्याम भुसालहरूले भन्ने गर्नुभएजस्तो पुँजीवादी भइसकेको होइन नेपाली समाज ?
पुँजीवादीकरण हुने प्रक्रियामा छ, भइसकेको कहाँ छ र ? हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि गुजारामुखी छ । केवल खानकै लागि खेतीपाती गरिन्छ । बजारको लागि खेतीपाती गर्ने त निकै कम छन् यहाँ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्था मि श्रणको रूपमा देखिन्छ । तर, नेपाली समाजको मूल चरित्र सामन्तवाद नै हो । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा त हामी साढे तीन चार सय वर्षपहिले नै प्रवेश गरेका हौं । तर, मूल अर्थतन्त्र फेरि पनि गुजारामुखी नै हो, सामन्तवादी नै हो, त्यसैआधारमा हाम्रो समाज बनेको छ ।
अर्थात्, मूलभूत परिवर्तन हुन नसक्नुको मुख्य कारण सामन्तवाद नै हो ?
मूलत: सामन्तवाद नै हो । अहिलेका जति पनि नेताहरू छन् अधिकांश स्थानीय जमिनदार हुन् । यदि जमिनदार होइनन् भने ती ठेक्कापट्टा, दलाली आदि गरेर कमाएका मानिस हुन् । यिनीहरूले कार्यकर्तालाई कजाएर राखेका छन् । मानवशास्त्रको भाषामा यस्तोलाई पेट्रोन-क्लाइन्ट रिलेसन भनिन्छ । जस्तै एकजना मुखिया हुन्छ त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ । अहिले पनि सरकारी कार्यालयमा होस् वा विश्वविद्यालयमा आफ्नो काम गराउनुपर्‍यो भने आफ्नो पार्टीको मान्छे समात्नुपर्छ ।
अर्थात् सामन्ती ढाँचामै दलहरू बनाइएका छन् !
- हामी भन्न त आधुनिकीकरण भन्छौं । मेरिटोक्रेसीमा जाने भनेर राज्यव्यवस्था स्वीकार पनि गरेका छौं । तर, आफ्नो पछि कुद्ने मान्छे खोज्छौं । कांग्रेस, एमाले हुन् वा माओवादी वा अरू पार्टीभित्रको संरचना र खासगरी चिन्तन सामन्तवादी नै छ ।
यसबाहेक अरू गुजुल्टा पनि छन् कि ?
- जस्तो समाज छ, व्यक्ति पनि त्यस्तै हुन्छ । हामी परिवर्तनको कुरा त गर्छौं तर आफैंले परिवर्तन स्वीकार्दैनौं । हामीमा परिवर्तनप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता छैन । हामी बढी रेटोरिक्स (आलंकारिक) भयौं । वास्तविकतामा हामी परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध नै छैनौं । हाम्रो व्यवहार सामन्तवादी नै छ ।
दलहरूको यस्तो सामन्ती चरित्रका देखिने परिणामहरू छन् कि ?
- यसको ठूलो प्रभाव हाम्रा संस्थाहरूमा परेको छ । म विश्वविद्यालयको उदाहरण दिन्छु । त्यहाँ मेरिटोक्रेसीको कुनै कदर नै गरिएको छैन । पार्टीका मान्छेहरूलाई मुख्य पदहरूमा भर्ती गरिन्छ, तिनीहरू अधिकांश सी-ग्रेडका हुन्छन्, जो पढ्दै पढ्दैनन् । कोही-कोही झुक्किएर पढ्नेहरू पनि हुन्छन् । तर, अधिकांश प्राज्ञिक रूपमा धेरै कमजोर तर पार्टीको निम्ति मरिमेट्ने मान्छे खटाइएको छ । क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्दा किन पार्टीको मान्छे राख्नुपर्‍यो ? त्यसको एउटै कारण हो- पछि अरू मान्छे भर्ती गर्दा पार्टीकै मान्छे भर्ती गर्न सकियोस् । यो भर्ती प्रक्रिया नै पेट्रोन-क्लाइन्ट रिलेसनमा आधारित छ ।
त्यसो भए हामीलाई यी प्रवृत्तिको विरुद्ध पनि आन्दोलनको आवश्यकता छ ?
- हरेक संस्थाहरूभित्र ती संस्था जोगाउन इन्डिभिजुअल (व्यक्तिगत) मुभमेन्टको आवश्यकता छ । हामी विश्वविद्यालय सकिन थाल्यो भन्छौं, त्यो नीति निर्माण गर्ने मान्छे गतिलो नभएर हो । तर, काम गर्दै गयो भने गर्न परिवर्तन त गर्न सकिन्छ । हाम्रो विभागले त गरिरहेकै छ । सुचारु अध्ययन, रिसर्च, पब्लिकेसन गरिरहेछौं । एक वर्षमा दुईवटा पुस्तक निकाल्यौं, पाँचवटा गोष्ठी गर्‍यौं । त्यसैले गर्न सकिन्छ । ल, सकिएन भने पार्टीकै पनि उपयुक्त मान्छे लैजाऔं न । केदारभक्त माथेमाजस्तो मानिसलाई लैजाँदा कसैले विरोध गर्छ ?
के हरेक संस्थामा इन्डिभिजुअल मुभमेन्ट सम्भव छ ?
-मानिसले व्यक्तिगत रूपमै सुरु गरे पनि त्यसलाई समर्थन गर्नेहरू हुन्छन् र त्यो सामूहिक रूपमै अगाडि बढ्छ । अहिले धेरैजसो संस्थामा इन्डिभिजुअल मुभमेन्ट भइरहेका छन् । तपाईं सबैजसो ठाउँमा निराशाका काला बादल देख्न पाउनुहुन्न । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केही विभागहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन्- पढ्ने, पढाउने, अनुसन्धान गर्ने, प्रकाशन गर्ने । समस्या के छ भने, नीतिगत रूपमा सहयोग गर्नेहरू भने छैनन् ।
अलिकति कुरा मोडौं, हरेक देशका सामाजिक-राजनीतिक गतिविधिमा विदेशी चासो र चिन्ता पनि रहनेगर्छ । हाम्रो सामाजिक प्रक्रियामा यस्तो कत्तिको पाउनुहुन्छ ?
अहिलेको संसारमा कुनै पनि देश आइसोलेसनमा छैनन् । त्यसमाथि नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति नै यस्तो छ कि जसमा सबैका आँखा पर्छन् । त्यसकारण यहाँ पाश्चात्य मुलुकको आफ्नै स्वार्थ छ । तीमध्ये मुख्यगरी अमेरिकाको छ । उसको मुख्य चासो तिब्बत हो । त्यसैगरी चीन पनि नेपालको भूमिको प्रयोग कसैले नगरोस् भन्ने चाहन्छ । त्यस्तै अरू पाश्चात्य मुलुकको पनि आफ्नैे चासो छन्- धर्मदेखि लिएर अरूअरूमा । तर, त्योभन्दा पनि महत्र्वपूर्ण हाम्रो आन्तरिक मामिला नै हो । हामीमा बेमेल भयो, विभाजन भयो, हामी मिल्न सकेका छैनौं, त्यसैमा अरूहरू खेलिरहेछन् ।
यी बेमेलका खाडलहरू पुर्न सकिने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि हुन्न ?
सम्भावना त संसारमा के को हुँदैन र ? अब हामी यस्तो अवस्थामा आएका छौं, यस्तै विभाजित मानसिकतामा रहेर अगाडि बढ्न सम्भव नै छैन । त्यसो त तपाईंले विश्वको इतिहास पढ्नु भएकै होला संसारका प्राय: सबैजसो मुलुकहरू यस्तै विभाजनहरू पार गरेरै अगाडि बढेका हुन् । हामीले पनि अब त्यो रियलाइज गर्ने बेला आएको छ । अब नेतृत्व पंक्तिमा पनि परिवर्तन त गर्‍यौं तर त्यसलाई जनताको पंक्तिसम्म पुर्‍याउन सकेनौं भन्ने बोध होला । कम्तीमा नयाँ पुस्ताका नेताहरूमा हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु म ।
हामीमा एकीकृत भावना विकास गर्न के-के हुनुपर्ला ?
हामी राजनीतिक आधुनिकीकरणमा गइरहेका छौं । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता राष्ट्रिय सहमतिको हो । तपाईं जुनसुकै राजनीति गर्नुस् तर नेपालको आर्थिक कायापलट गर्ने न्यूनतम एजेन्डामा सबै सहमत हुनुपर्छ । तर, यहाँ त्यस्तो भइरहेको छैन एउटा पार्टीले पाँच सय भत्ता बाँड्यो भने अर्कोले हजार बाँड्छ, होडबाजीभन्दा अरू केही छैन । हाम्रो राजनीतिमा पपुलरिज्म हाबी भइरहेको छ ।
त्यस्तै हाम्रो विदेश नीतिमा पनि मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर, अझै पनि राष्ट्रिय हितको साझा एजेन्डा के हो भनेर निर्धारण नै गरिएको छैन । हामीले अहिलेसम्म कसरी एकद्वारबाटै विदेशी नीति सञ्चालन गर्ने भनेर निक्र्योल गर्न सकेका छैनौं । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
नेताहरूमा सामन्तवादी चिन्तन नै हावी भएकाले उनीहरू आफ्ना कुल, परिवार, आसेपासेलाई मात्र ध्यान दिइरहेछन् । बढीभन्दा बढी उनीहरू निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा केन्द्रित छन् । हाम्रा नेताहरूमा राष्ट्रिय चिन्तन नै छैन । त्यसैले तीन चिज हुनुपर्छ : राष्ट्रिय आर्थिक विकासको साझा एजेन्डा, विदेश नीतिमा एकमत र राजनीतिक दलहरूभित्रको जमिनदारी अन्त्य भएर युवाहरूलाई नेतृत्व ।
यी सबै नहुनुको पछाडि राजनीतिक दलहरूले बौद्धिक वर्गको साथ नपाएर हो कि ?
हाम्रा राजनीतिक दलहरूले रियल इन्टिलिजिन्सिया (वास्तविक बौद्धिकता) प्रयोग गर्नै सकेका छैनन् । आफ्ना राजनीतिक दलका 'दलाल बौद्धिकहरू'को त प्रयोग भइरहेको छ तर वास्तविक एक्स्पर्टहरूसँग राजनीतिक दलहरू पुगेकै छैनन् ।
एउटा फरक प्रश्न, वर्तमान अवस्थामा नेपाल कहाँ छ ? यसको भविष्य कस्तो छ ?
अहिले नेपाल संसारमै आर्थिक, सामाजिक रूपले धेरै पछाडि परेको देश हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो इज्जत नै छैन । किनभने हामीले आफ्नो खुट्टामा उभिएर पहिचान नै निर्माण गर्नसकेका छैनौं । अहिले हामी कामदार निर्यात गर्ने, संक्रमणकालमा अल्झिरहेको अस्थिर देश भनेर चिनिन्छौं । आर्थिक रूपमा थोरैमात्र उँभो लाग्नेबित्तिकै हाम्रो यो पहिचान फेरिनेछ । त्यसको लागि स्थायी सरकार पूर्वसर्त हो ।
हाम्रो भविष्य भने उज्ज्वल छ । हाम्रो डेमोग्राफिक डिभिड्यान्ट पनि बलियो छ । श्रम गर्न सक्ने युवा जनशक्ति अहिले हामीले बाहिर पठाइरहेछौं । उनीहरूलाई रोजगारको अवसर दिएर स्वदेशमै राख्न सक्नासाथ हामी प्रगतिको बाटो समात्छौं । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला हामीमा भएको सामन्तवादी संस्कार फेर्नुपर्छ र ब्युरोक्रेसी र संस्थाहरूमा मेरिटोक्रेसी लागू गर्नुपर्छ ।
यी सबै परिवर्तनका लागि हामीलाई नेसनल हिरो (राष्ट्रिय नायक)को खाँचो परेको हो ?
दुईवटा कुरा भन्छु । एक, हामीले भन्नासाथ एकाएक नेसनल हिरो आउँदैन । त्यो परिस्थितिले हामीमध्येबाटै जन्माउने हो । अर्कोतर्फ भन्ने गरिन्छ, पिपल गेट द लिडरसिप दे डिजर्भ (हरेक जनसमुदायले आफूअनुसारकै नेतृत्व पाउँछ) । कम्तीमा हरेक पार्टीमा भएका युवा पंक्ति सामन्तवादबाट मुक्त हुनुपर्‍यो । त्यस्तो युवा नेता म देख्दिनँ । तर, परिस्थितिले कुशल नेता जन्माउनेछ ।
शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिको प्रश्न : भारतसँग कुरा गर्न किन डराउने? 2815
भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलार्इ प्राथिमकता, यस्तो छ तयारी 1204
'एमालेलाई सिध्याउन कांग्रेससँग सहकार्य' 44063
दिल्लीसँग बार्गेनिङको हैसियतमा नेपाल 303
नयाँशक्ति छाडेका नेता 'माओवादीतिरै' 6724
प्रिन्सिपलसँगको अवैध सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएपछि ट्‍वाइलेटमा लगेर हत्या.. 27086
आमा–आमा भन्दा भन्दै नातिनीलाई हातैबाट बाढीले बगायो.. 7182
आरजुको राहतले भूकम्पपीडित दंग 14051
बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा सामाजिक सञ्जाल 1387